Global Voices teny Malagasy » Raha Handalo Aty Madagasikara Ianao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Avrily 2014 14:54 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Madagasikara, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tsidika
Hoan'ireo sambany vao tonga, mety ho olana hatrehina ny fitateram-bahoaka eto Madagasikara. Maro ny antony mahatonga izany. Manana velaran-tany 590 000 km2, efa antitra sy tsy misy fivoarana intsony ny foto-drafitrafisan'ny lalana ato amin'ny firenena. Mivelatra ny lalamby saingy mbola tsy misy izany amin'ny ankamaroan'ny tanàndehibe.
Ao afovoan-tanàndehibe, voafetra amin'ireo fiara salantsalany mpitatitra olona feno hika ny fiara fitateram-bahoaka ary mijanona ho tetikasa hoan'ny renivohitra, Antananarivo, fotsiny ihany ny lalamby an-tanandehibe.
Anisan'ny olana fantatra tsara ao andrenivohitra ny fitateram-bahoaka. Renivohitra ahitana mponina roa tapitrisa sy fiara tombanana eo amin'ny 110 000 eo ny isany. Matetika ahitana fitohanan'ny fiara ireo lalàna eto an-drenivohitra araka ny hita amin'ity sary eto ambany ity:
Fitohanan'ny fiara ao andrenivohitra Antananarivo, sary tao amin'ny Madagascar-aventures. CC-NC-2.0
Hita amin'ity sary manaraka avy amin'ny viva Madagasikara ity ny fiantraikan'ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra
Anisan'ny tsy zakan'ireo mponina ity karazana fitohanan'ny fiara ity ka mandinika ny tokony hametrahana lalana fitatera-mihantona eo amin'ireo tampon'ny vohitra be olona indrindra ao an-tanàndehibe  ny fitantanana an'Antananarivo:
Ity zotra ity dia hampitohy ny Tanàna Ambony amin'i Mahamasina. Na dia izany aza, mbola tsy nanome ny antsipirahany mikasika ny fanombohan'ny asa na ny tetibolan'ny tetikasa ny Filohan'ny Delegasiona Manokana. Mikasika ny fampiasana izany fitatera-mihantona andrenivohitra izany kosa, hampihatra ity rafitra fitaterana iombonana ity aorian'i La Paz  ny renivohitra.
Manoloana ny vola ilaina amin'ity tetikasa ity (tombanana ho € 166 tapitrisa na 230 tapitrisa dolara tamin'ny fananganana tao La Paz) sy ny fahantrana lalina ao andrenivohitra, maro ireo manontany raha ilaina marina ny tetikasa tahaka izany. Marc Harmelle nanoratra  hoe [fr]:
Raha mihevitra hanamboatra fitatera-mihantona, tsy aleo ve manomboka amin'ny fikakasana ny tanànam-barìka, mamindra toerana ireo olona any amin'ny toerana mendrika ny maha-olona, manome fitsaboana sy mampianatra ireo ankizy?
Fitateram-bahoaka eto Madagasikara
Raha anisan'ny olana goavana ao an-tanàndehibe ny fitohanan'ny fiara, mila asa fanamboarana goavana ihany koa ireo lalana rezionaly. Nanamarika ny lohatteny lehibe tao amin'ny gazety Tribune fa mbola maro ny zavatra tokony atao  [fr]:
Lalana 11 700 km no mila amboarina manerana an'i Madagasikara ao anatin'ny 6 volana […] Hisahana ireo lalana mila fanamboarana maika sy izay tokony hamboarina vonjimaika simban'ny loza voajanahary ny OTU (Biraon'ny Asa Vonjimaika)
Nampitandrina ireo mpamaky mikasika ny toetry ny lalana ao amin'ny Lalam-pirenena faha-2 mampitohy ny renivohitra sy ny seranan-tsambon'i Madagasikara ao Toamasina ny fikambanana tsy miankina antsoina hoe Lalana:
Miha-simba ny foto-drafitrasan'ny lalana manerana firenena. Nokorontanin'ny krizy politika ny fandehan'ny famatsiam-bola amin'ny fandaharan'asa fikojakojana sy ny asa vonjimaika. Tsy mbola nisy fanamboarana akory ankehitriny ireo fahasimbana navelan'ireo rivo-doza izay namely ny firenena tamin'ny taon-dasa. Tahaka izany ohatra ny lalam-pirenena faha-2 mampitohy an'Antananarivo amin'i Toamasina. Marobe ny tany mihotsaka sy ny arabe nofaohin'ny riaka.
“Fiara fitaterana eny ambanivohitra” mandalo lalampirenena eto Madagasikara. Tao amin'ny Tana News. Sary azon'ny rehetra ampiasaina
Mbola hafa ihany ny fandehanana mitsidika an'i Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fiaram-pitaterana “taxi-brousse” eny ambanivohitra no fomba tsotra hivezivezena. Maro ireo karazana fiara manao “taxi-Brousse”, saingy ny “fiara-salantsalany” no tena maro, araka ny hita tamin'ity sary farany eto ambony ity. Rehefa tonga amina tanàna ivelan'ny renivohitra kosa dia afaka mandeha “posiposy”, araka ny hita amin'ity lahatsary manaraka ity:
Nanipika i Ariniaina, mpanoratra ato amin'ny Global Voices monina eto Madagasikara fa niova ny lalàna mikasika ny posiposy eto Madagasikara, saingy mbola fitaovam-pitaterana be mpampiasa hoan'ireo mponina marobe ao amin'ny faritra (Antsirabe) izany :
Nosokajiana ho fanitsakitsahana ny zon'Olombelona ny posiposy izay fitaovam-pitaterana tarihin'olombelona. Ka nanao ny “cyclopousse”-posiposy tarihim-bisikileta ny fiadidian'ny tanàna [lapan'ny tanàna] ao Antsirabe [tanàn-dehibe faharoa eto Madagasikara]. Na dia izany aza, mbola fitaovam-pitaterana fampiasan'ireo mponina marobe ao Antsirabe foana ny posiposy “nentim-paharazana”.
Ariniana maka sary miaraka amin'ny posiposy sy ny tompony tao Antsirabe, Madagasikara. Nahazoan-dalana.
Miezaka manatratra ny fitombon'ny mponina ny fitaterana iraisam-bahoaka, fa noho ny fisian'ny fetra ara-toekarena, dia antenaina haharaka izany – na dia ao anatin'ny fotoana fohy aza aloha.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/04/28/59479/
 lalana fitatera-mihantona eo amin'ireo tampon'ny vohitra be olona indrindra ao an-tanàndehibe: http://matv.mg/?p=43999
 La Paz: http://inhabitat.com/worlds-longest-cable-car-system-set-to-open-in-la-paz-bolivia/
 mbola maro ny zavatra tokony atao: http://www.madagascar-tribune.com/11-700-km-a-reparer-en-6-mois,17748.html
 mampitohy ny renivohitra sy ny seranan-tsambon'i Madagasikara ao Toamasina : http://onglalana.wordpress.com/2013/01/11/madagascar-inquietude-sur-letat-de-la-rn2/
 fitaovam-pitaterana be mpampiasa hoan'ireo mponina marobe ao amin'ny faritra (Antsirabe) izany: http://ariniaina.wordpress.com/2009/06/01/garage-vony-rickshaw-manufacturer/